Bawufuna la imunwe wengane olahlekile | News24
Bawufuna la imunwe wengane olahlekile
Durban - Usangene amakhanda umndeni wakwaNdelu eNanda, enyakatho yeTheku, ohambise ingane yawo yentombazane enkulisa yabuya isishumpulwe umunwe.
Okudida kakhulu lo mndeni ukuthi lo munywe wengane onqamukile awukaze utholakale njengoba sebewufune baze bancama lapho ingane okuthiwa ilimalele khona.
Ngokusho kukanina wengane, uSilindile Ndelu, 33, ingane yakhe eneminyaka emithathu ubudala ibifunda eMasibonisane Creche, eseNewtown A, khona eNanda.
Uthi bekuwusuku lokuqala indodakazi iya enkulisa nokuthe uma esesemsebenzini wathola ucingo oluthi makaphuthume emtholampilo ingane yakhe ilimele.
“Ngithe uma sengifika emtholampilo umhlengikazi wangitshela ukuthi ingane ilimele kodwa hhayi kakhulu. Uma ngibuza ukuthi ilimale kade kwenzenjani bathi iciphezelwe yisihlalo setekisi kamalume elibahambisa liphinde libabuyise enkulisa.
“Uma sebengikhombisa ingane ngethuke ngoma ngibona umunwe ungekho, sekusele isinqindi selunga elilodwa lawa amanye amabili engekho.
“Uma ngibuza ukuthi uphi lo munwe onqamukile bathi abazange bawuthole emotweni. Bayishanelile kodwa ubungekho.
OLUNYE UDABA: Owesifazane udlwengulwe phambi kukaphathina wakhe, base beshiswa
“Bathi ngesikhathi ingane ilimala kayizange ize yophe. Uthishomkhulu wasenkulisa ubehamba naye umshayeli nosicabha wetekisi ngesikhathi bezongichazela lokhu. Uze wathi, ‘ngaze ngavelelwa Nkosi yami, sekuzothiwa ngithwala ngeminwe yezingane,” kusho uNdelu…
Uthi uma ingane beyibuza ithi ilunywe ngumalume, ibuye ithi yisicabha semoto kamalume.
UNdelu uthi ngesikhathi sebedluliselwe esibhedlela i-Addington ufonelwe uthishomkhulu wathi uzomnikeza u-R500 ukuze ezothenga ukudla ngoba uyazi ukuthi onina bezingane abahlinzekwa ngokudla uma besesibhedlela bephelezele izingane zabo.
Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natala uCapt Nqobile Gwala usiqinisekisile lesi sigameko kodwa wathi amaphoyisa asaphenya njengoba kuvulwe idokodo lophenyo.